Filoha tany Ambositra : “ Tsy vitan’ny resa-be ny fampandrosoana ” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha tany Ambositra : “ Tsy vitan’ny resa-be ny fampandrosoana ”
Filoha tany Ambositra : “ Tsy vitan’ny resa-be ny fampandrosoana ”
08/04/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Betsaka tokoa amin’izao fotoana izao ireo mpanao pôlitika mpanohitra no mitsikera be fahatany mahakasika ny asa fampandrosoana ataon’ny fitondram-panjakana ankehitriny. Fitsikerana tsy mitondra mankaiza anefa satria tsy hita akory ny zavatra mivaingana ataon’izy ireo ho an’ny firenena. Ireto farany ihany koa izay hita fa minia mikimpy amin’ny zavatra vitan’ny fitondrana, noho ny firehana pôlitika tsy mitovy. Nefa raha vonona hampandroso ny firenena dia tokony tsy hisy intsony izany fomba fijery miendrika fankahalana izany satria izay ihany no mbola tsy mampandroso an’i Madagasikara. Ao anatin’izay indrindra, nanambara ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, omaly, tany Ambositra, nandritra ny fitokanana ny ivon-toerana fampianarana ho an’ny fambolena sy fiompiana fa “mila faharetana ny fampandrosoana satria tsy ny fitenenana lava hoe mbola lavitra ny lalana no mampihena izany fa ny fanaovana dingana, firosoana tsikelikely ho amin’ny tsaratsara kokoa. Tsy vitan’ny resabe ny fampandrosoana. Tsy tokony ho kivy amin’ny fandrabirabiana maro samihafa araka izany fa tokony hilofo amin’izay anjara tandrify azy avy. Miantso anareo olom-pirenena hivonona amin’izay toe-tsaina izay ny tenako mba hiara-hiasa amiko.”
Fotodrafitrasa maro no notokanana
Fanamby iray hijerena ny fampandrosoana ny seha-piharian’ny Malagasy maro an’isa indray no tanteraka tany amin’ny renivohitry ny faritra Amoron’i Mania. Trano fianarana vaovao ahitana efitrano fianarana sy fanaovana fikarohana no natolotry ny Filoha Rajaonarimampianina Hery ny mpianatra izay handranto fianarana ao Ambositra amin’ny alalan’ny ISTA (Institut Superieur de Technologie Ambositra). Izao no tanteraka dia noho ny asan’ny fitondram-panjakana izay tsy mitsahatra mitady vahaolana amin’ny olana mianjady amin’ny vahoaka malagasy. Ankoatra izay, nomen’ny fitondram-panjakana lanja ihany koa ny fanofanana ny tanora hahay hamboly. Nambaran’ny filoha koa fa hampidirina ao anatin’ny tetikasa fampandrosoana ny fanamboarana ny lalana mirefy 232 kilometatra mampitohy an’Ambatofinandrahana sy Malaimbady. Io lalana io izay fivoahan’ny voka-bary any amin’iny faritra iny. Eo ihany koa ny fametrahana ivon-toerana famokarana herinaratra izay mbola olana tsy ahafahan’ny indostria miroborobo any amin’ny faritra Amoron’i Mania.
Ankoatra ny toeram-pianarana dia notokanana omaly tany Ambositra, koa ny tetezan’Ankorombe izay hivezivezen’ny mpianatry ny CEG sy ny Lisea, ny mpanao fanatanjahantena hamonjy kianja. Nambaran’ny lehiben’ny faritra Amoron’i Mania fa vonona hatrany ny vahoaka any an-toerana hanohana ny ezaka vita.
Vondrona parlemantera HVM : Nametra-pialana i Jaona Elite
Hery Rajaonarimampianina : « Ampy izay ny adilahy politika »
Hery Rajaonarimampianina : Miasa ho an’ny vahoaka sy ny firenena